Imbali yezinto zokudlala eziLutsha
Abavelisi bebhoyi kunye nabaqambi bezinto zokudlala bayasebenzisa zombini i-utility kunye noyilo lobunikazi, kunye neendlela zokuthengisa kunye neefayili. Enyanisweni, amathoyizi amaninzi kwimidlalo yevidiyo ayisebenzisela zonke iintlobo ezintathu zokukhuselwa kwepropathi yengqondo.
Amathoyizi njenge "shishini elikhulu" alizange liqale de emva kwee-1830, xa iindawo zokuhamba kunye nezitimela zomoya ziphuculwe ukuthutha nokuhanjiswa kwempahla eyenziweyo. Abaqhwaqho bokuqala babesebenzisa imithi, i-tin, okanye i-iron ifowuni, amajoni, iinqwelo kunye nezinye izinto ezilula.
Indlela kaCharles Goodyear yokwenza "inkunkuma" yerabha yakha enye imidiya yokuvelisa iibhola, iimboli, kunye nokudlala imidlalo.
UMatel waqala ngo-1945, njenge-garage workshop kaHarold Matson no-Elliot Handler. Igama labo lebhizinisi elithi "Mattel" lidibanisa iileta zamagama abo okugqibela kunye nokuqala, ngokulandelanayo. Iimveliso zokuqala zikaMatel zazingumfanekiso weefoto, nangona kunjalo, u-Elliot waqala ukwenza ifenitshala yedola yeefreyimu zefreyimu. Oku kuye kwaba yimpumelelo kangangokuthi uMatel washintsha ukuba angenzi lutho ngaphandle kweetayiti.
Ngasekuqaleni kwee-1970, uPong, umdlalo wevidiyo wokuqala onelungelo lobunikazi wawunzima kakhulu. UNolan Bushnell wadala uPong kunye nenkampani egama linguAtari.
I-Pong yaqala kwii-arcades kwaye yayisetyenziswe kwiiyunithi zasekhaya kungekudala. Iimidlalo ezihlaselayo ze-Space, i-Pac-Man kunye neTron zilandelwe. Njengoko iteknoloji iqhubekile, umatshini omnye womdlalo ozinikezelwe watshintshwa nguomatshini ocwangcisiweyo oye wavumela imidlalo ehlukeneyo ukuba idlalwe nje ngokutshintsha i-cartridge.
Izixhobo ezisesekethe kunye ne-miniaturization ekuqaleni kwee-1980 zavelisa imidlalo ephathekayo, njengoko iNintendo, inkampani yaseJapan ye-electronics kunye nabanye abaninzi, yafudukela kwimakethe yemidlalo yevidiyo.
Iikhomputha zaseKhaya zenza iimarike zemidlalo ezahlukahlukeneyo, izinto ezipakishweyo, ezicelomngeni, kwaye ezahlukahlukeneyo.
Njengoko iteknoloji yethu iqhubela phambili, kunjalo nobunzima kunye nokuhlukahluka kwezinto zethu zokuzonwabisa. Ngesinye isikhathi, amathoyizi abonakala nje ngokuphila kwansuku zonke nemisebenzi. Namhlanje, amathoyizi adala iindlela ezintsha zokuphila kwaye asifundise ukulungelelanisa nezobuchwepheshe kunye nokusikhuthaza ukuba silandele amaphupha ethu.
Imbali yezinto ezizodwa zokudlala
Ukusuka kuBarbie ukuya ku-Yo-yo, funda ngokubanzi malunga nendlela udlala ngayo umdlalo ozithandayo
Iipuzzle, iBhodi neKhadi leMidlalo
Ukuqhayisa kunye nokwesabisa amazwi e-Shark